Akụkọ - Gịnị kpatara eji eji FIBC eme ihe n'ọtụtụ ebe?
Kedu ihe eji eji FIBC eme ihe ebe niile?
FIBC (Nnukwu ihe na-agbanwe agbanwe nnukwu akpa) bụ nnukwu akpa ejiri eriri rọba a na-akpọkarị polypropylene nke nwere ọtụtụ uru dị ka ike dị egwu, ịdịte aka, nguzogide, mgbanwe na mgbanwe.
Akpa Jumbo na -achọsi ike n'ihi ọtụtụ ụlọ ọrụ na -adabere n'ikike ha nwere ibuga nnukwu ntụ ntụ, flake, pellet na ngwaahịa granule n'enweghị nsogbu. Ịdị mfe nke akwa akwa PP na-eme ka akpa ahụ dị mma ma dịkwa mma. Site na mmepụta nri na ọrụ ugbo ruo n'ichepụta, ijikwa na ibufe kemịkal, akpa akpa FIBC na -eme ka ọ dị mfe ibufe ngwaahịa dị iche iche.
FIBC chọrọ ụzọ igwe dị ka forklift ma ọ bụ kreenụ iji mejupụta, mwepụ na mbufe, nke pụtara obere njikwa ndị ọrụ na mmerụ ahụ ole na ole kpatara. Ka ọ dị ugbu a, FIBC nwere ike inye aka belata ọnụ ahịa ọrụ ma e jiri ya tụnyere akpa rọba ma ọ bụ akpa akwụkwọ.
Enwere ike idobe FIBC ndị nwere oke nke ọma karịa obere akpa, na -abawanye ojiji nke ụlọ nkwakọba ihe na akpa mbupu.
FIBC na mba dị iche iche nwere ụkpụrụ mmejuputa dị iche iche
Mgbe ọtụtụ iri afọ nke mmepe nke ụlọ ọrụ FIBC, obodo ọ bụla nwere iwu maka ịkwado.
Ụkpụrụ FIBC na China bụ GB/ T10454-2000
Ụkpụrụ FIBC na Japan bụ JISZ1651-1988
Ụkpụrụ FIBC na England bụ BS6382
Ụkpụrụ FIBC dị n'Australia bụ AS3668-1989
Ụkpụrụ FIBC na Europe bụ EN1898-2000 na EN277-1995
Akpa akpa ndị a na -agbanwe agbanwe dị mma n'ihi na ọ dị mfe ịjupụta, bulite, jiri forklift ma ọ bụ kreenu na njem. Nhazi ha pụrụ iche abụghị naanị maka nchịkọta nke ọma; Akpa akpa FIBC dị nchebe karịa ụdị mbupu ụzọ ndị ọzọ. N'ime ụdị akpa akpa FIBC, enwere ọkwa dị iche iche maka igbo mkpa ụfọdụ.
Pp akpa Fibc, Nnukwu akpa Fibc, Akụ Fibc Akụkụ, Akpa Jumbo Fibc, Ụdị akpa Fibc, Nkwakọ ngwaahịa Fibc,